Fomba entina mampiditra: USB vs Wi-Fi vs Bluetooth | Vaovao IPhone
Fomba fampidirana tetera: USB vs Wi-Fi vs Bluetooth
Vaovao IPad | | iOS, iPad, Apple products
Iray amin'ireo fiasa "miafina" faran'izay Apple ny tethering, fiasa iray ahafahantsika mizara ny Internet amin'ny fitaovana hafa. Izany hoe, alaivo an-tsaina hoe handeha hitsangatsangana isika ary manana karatra 4G ao amin'ny iPad-ko, satria amin'ny alàlan'ny fametahana izany Apple dia manolotra amin'ny iPad fahatelo Hahafahako mizara ny Internet amin'ny takelaka mankany amin'ny solosaina (na fitaovana hafa). Ny tethering dia azo atao amin'ny fomba samihafa: amin'ny alàlan'ny USB, mamorona tamba-jotra Wi-Fi na amin'ny Bluetooth. Inona no fomba fampiasana ary nahoana? Aorian'ny fitsambikinana ny fampahalalana rehetra.
Inona no fomba fametahana ampiasaina ary nahoana?
Ireo mpiara-miasa iMore dia nihazakazaka fandinihana hafainganana tamin'ny fampiasana ireo fomba telo samy hafa amin'ny fizarana Internet amin'ny iPads ary izao no valiny:
Fanamafisana Wi-Fi: 13.62 mbps misintona, 2.56 mbps mampakatra, miaraka amin'ny salanisa ping 115 ms
Fametahana USB: Fampidinana 20 mbps, 4.76 mbps mampakatra, 95 s averina
Fanamafisana Bluetooth: 1.6 mbps misintona, 0.65 mbps mampakatra, eo ho eo amin'ny 152 ms
Inona no dikan'ity? Iza amin'ireo no marina? Ireto misy lakile hitadiavana izay miankina amin'ny zavatra tianao hatao amin'ny Internet, ny fampiasana tadiavinao omenao rehefa mizara izany amin'ny iPad ianao.
Ny fizarana Internet amin'ny alàlan'ny USB no fomba azo antoka sy haingana indrindra araka ny hitantsika amin'ny fitsapana hafainganana an'ireo bandy ao amin'ny iMore. Ho fanampin'izay, iray amin'ireo tombony azo amin'ny fampifandraisana ny iPad amin'ny solosaina ny hoe rehefa mampita ny Internet isika dia afaka mameno ilay fitaovana. Raha tianao ho haingana araka izay azo atao ny fifandraisana, dia amporisihinay hampiasa USB ianao (raha toa ka manana USB maimaim-poana ary mifanaraka aminy ny fitaovana mandray).
Raha tsy manana seranan-tsambo USB ianao ary tsy afaka mampifandray ilay fitaovana fanakanana mandray amin'ny alàlan'ny Wi-Fi dia mila mampiasa Bluetooth-n'ny iPad-nao ianao. Ny olana amin'ity fomba ity dia ny fampiasana haingana ny batterie ary afaka mifandray amin'ny fitaovana tokana indray mandeha ianao, raha fitaovana maro kosa no azo ampifandraisina amin'ny alàlan'ny Wi-Fi. Raha izaho manokana dia avelako ny tethering Bluetooth amin'ny toerana farany "fomba mahasoa".
Ary farany, raha te hizara Internet amin'ny fitaovana maro miaraka ianao (miaraka amin'ny hatramin'ny 10 amin'ny orinasan-telefaona sasany) ny fomba fanaonao dia ny mamorona tambajotra Wi-Fi. Na dia tsy azo itokisana toa ny USB aza izy io, dia manome hafainganam-pandeha mora vidy ary tsy dia tsikaritra loatra amin'ny fomba iray mankany amin'ny iray hafa. Fa mazava ho azy, ity fomba ity dia handany ny bateria haingana kokoa ihany koa.
Inona no fombao hizarana Internet amin'ny iPad tianao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Fomba fampidirana tetera: USB vs Wi-Fi vs Bluetooth
Abel dia hoy izy:
Ka, inona ny fomba mety ampy amin'ny batterie, wi-fi na bluetooth bebe kokoa?
Valiny tamin'i Abela
Luis Padilla dia hoy izy:
Ny fampiasana tethereing amin'ny alàlan'ny Wifi dia mampiasa batterie haingana kokoa noho ny mampiasa bluetooth. Manana tombony bebe kokoa ny fomba WiFi, araka ny nomarihin'i Angel (mampifandray fitaovana bebe kokoa, haingana kokoa) fa mampidina ny bateria kosa izy.
Valiny tamin'i Luis Padilla
Alohan'ny "haingam-pandehananao" dia gaga aho.
Rehefa manao thetera amin'ny alàlan'ny USB aho (telefaona mifandray amin'ny tariby amin'ny PC) dia manome ahy hafainganana MAXIMUM 429 KILOBITES Down (Tsy tonga hatramin'ny antsasaky mega akory aza).
Tsy fantatro izay mety ho.
Fampianarana: Ahoana ny fomba hahitana ireo lahatsoratra Facebook farany 10.0
Fivoarana ny famahana ny efijery avy amin'ny iPhone ka hatramin'ny iPhone 6 Retina3x